Waa maxay sababaha loo ijaarayo xirfadle SEO?
Sannad kasta, makiinadaha raadinta sida Google, Bing ama Yahoo ayaa isbedelaya xuduudaha farsameed iyo raadinta algorithm ee qiimeynta bogga SERP. Inta badan milkiilayaasha bogagga ma haystaan ​​wakhti ku filan iyo waayo-aragnimo si loo kormeero suuq-geynta suuqa oo si joogto ah loo beddeli karo. Taasi waa sababta ay u sameeyaan go'aan sax ah oo ay ku kireystaan ​​la-taliye SEO oo abuuri kara olole wacan oo lagu gaarayo ilaha webka. Sidaas awgeed qaybta ugu hooseysa ee habka wax-ku-oolka ee tayada leh waxay shaqaaleysiisaa koox SEO ah oo la isku halayn karo. Haddii aad weli ka shakisan tahay inaad u baahan tahay inaad kiraysato xirfadle xirfadle ah oo SEO ah ama haddii kale, sababaha soo socda ayaa kaa caawin doona inaad maskaxdaada ka dhigi. Sababaha ugu muhiimsan ee loo shaqaaleeyo khabiir SEO ah oo khibrad leh
Raadinta mashiinka raadinta waa nidaam waqti-qaadasho ah oo aan la samayn karin hal shey. Caadi ahaan, waxay qaadataa 4 ilaa 6 wiig si aad u hagaajiso dhammaan qaybaha SEO-ga oo kaliya kadib markaad awoodi doonto inaad iska hubiso natiijooyinkaaga wanaagsan. Si aad u abuurto istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo lagu guuleysto, waxaad u baahan tahay inaad ku lug lahaatid geeddi-socodkan waqti-dheer. Inta badan milkiilayaasha ganacsiga badankood ma haystaan ​​wakhti ku filan oo ay ugu tagaan ololeha SEO si buuxda. Nasiib wanaag, shirkad SEO ah oo lagu kalsoon yahay ayaa leh waqti iyo waayo-aragnimo ku filan si aad u siiso ololehaaga dallacaadda SEO ee dareenka uu u baahan yahay.
Haddii domain aad hore u jirtey in ka badan hal sano oo aadan u eegin ugu horeysay ama ugu yaraan bogga SERP labaad bogga, macnaheedu waa in ay jiraan wax qalad ah oo ku ool ah goobtaada. Si aad u noqoto mid firfircoon, raadinta ololeynta tamarta mashiinka waa in si sax ah loo sameeyaa. Ha seegin fursaddaada inaad abuurto raadad dheeraad ah oo tixraac koox kale oo SEO ah. Waxay kaa caawin doonaan inaad saxdo qaladaad farsamo iyo horumarinta boggaaga SEO. U hubso inaad shaqaaleyso khabiir xirfadle ah oo khibrad u leh SEO kaasoo ku siin kara natiijooyin la xaqiijiyay iyo faylalka mashaariicda lagu guuleysto. Haddii kale, waxaad halis u tahay inaad lacag iyo waqti qashin.
Waxaad u baahan tahay inaad kireysato shirkad SEO ah sida ay ogyihiin sida loo sameeyo boggaaga user-friendly. Waxay ku siin doonaan naqshad goobta dhismaha ah iyo si sahlan loo isticmaalo navigation. Hagaajinta dhismahaaga iyo qaabka muuqaalka, waxaad soo jiidan doontaa macaamiishooyin badan oo suurtogal ah oo iyaga u leexinaya inay macaamiisha bixiyaan.
Google ayaa si joogto ah u cusbooneysiisay algorithms, sidaas awgeed ganacsigaagu wuxuu u baahan yahay koox khubaro ah oo lagu dhajiyay dhammaan isbeddelka suuqyada iyo fahamsan sida loo xaliyo isbeddelada goobtaada si looga fogaado waxyeelaynta heerarkeeda.
La taliyaha SEO-ga khibrad leh ayaa kaa caawin doona inaad ka sii hormariso tartamadaada. Isticmaalayaasha casriga ah ee haysta helitaanka badeecooyin badan oo internetka ah iyo adeegyo, khabiir SEO ah oo wanaagsan ayaa kaa dhigi kara inaad boggaagu aad u soo jiidasho leh iyo kuwa isticmaala saaxiibtinimo oo ka badan kuwa aadka u xiisaha badan ee suuqa.
Raadinta mashiinka raadinta waa nidaam qiime-wax-ku-ool ah maaddaama dhammaan maalgashiyadaada lagu bixiyo lacagaha. Taasi waa sababta, ha u malayn in aad kireysato talo-bixiye SEO ah kharashka, ka feker sida ay faa'iido u yeelaneyso olole wanaajin tayo leh iyada oo kuu sahleysa inaad abuurto raadad dheeraad ah iyo waxaad ku riixeysaa astaanta internetka 23) joogitaan Source .